UVA လွှဲပြောင်းမှုအတွက်တရားမဝင်၊ ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် - နှုန်းထားများ
UVA လွှဲပြောင်းမှုအတွက်တရားမဝင်၊ ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်
တစ်ယောက်ယောက်က UVA ကအပြောင်းအလဲတွေအတွက်ကျောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောတိုင်းအချိန်တိုင်းငါဒေါ်လာရခဲ့ရင်ငါ့ကျူရှင်ကသူ့ဟာသူအတွက်ကောင်းကောင်းကောင်းကောင်းပေးနိူင်တယ်။ ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ကြောင်းလုံးဝခွင့်မပြုလျှင် UVA တွင်အခြေချရန်နည်းလမ်းရှာလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ လွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ခုသည်ခက်ခဲသော UVA အတွေ့အကြုံများအတွက်သေချာသည်။ သို့သော်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ထူးခြားသည်။ သင်တွေ့ဆုံသူတိုင်းသည်ပထမနှစ် Dorms မှအစောပိုင်း (သို့) အစောပိုင်းကပင်သူတို့၏မိတ်ဆွေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုသိကြပြီးရပ်ကွက်အတွင်းနေရာယူခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းသည်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဟုထင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိ (နှင့်အနာဂတ်လွှဲပြောင်းမှုများ) နှင့်မျှဝေရမည့်တစ်ခုတည်းသောအကြံပေးချက်မှာ ကျေးဇူးပြု၍ (သင်၏အတွက်) ကျောင်းသားအိမ်ရာကိုလွှဲပြောင်းခြင်းထက်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါ၏အခါးပတ်အောက်ရှိ UVA တွင်စာသင်ချိန်တစ်ခု၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသူငယ်ချင်းများ၊ ညီအစ်မအုပ်စုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအချို့သည်ငါသည် ၂၀၁၈ အတန်း၏အသင်း ၀ င်တစ်ဝက်မျှသာဖြစ်သည်ဟုချစ်ခင်တွယ်တာနေသော်လည်း၊ ဒီစာသင်နှစ်တတိယနှစ်ကောင်စီအီးမေးလ်များကိုလက်ခံခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး၊
ငါမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းရွှေ့သောကျောင်းသားများနှင့်မကြာသေးမီကလွှဲပြောင်း - ဘွဲ့ရနှင့် TSPA (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့ယခင်အယ်ဒီတာ) နှင့်ယခုနှစ် TSPAs များအနေဖြင့်အနာဂတ်လွှဲပြောင်းမှုများဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးနှင့်ရှာဖွေနိုင်ရေးတို့ကိုပင်ကျွန်ုပ်ထံဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ UVA မှာသူတို့ရဲ့အိမ်။
Amelia, 3rd နှစ်, Fall 2015 လွှဲပြောင်း
ရာသီ၏ပထမ ဦး ဆုံးဂိမ်း!
ကျွန်ုပ်၏ UVA အတွေ့အကြုံ၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းသည် UVA ထုံးတမ်းစဉ်လာများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။ Lighting of the Lawn, Rotunda Sing နှင့်ဘောလုံးဂိမ်းများ။ ငါဘယ်သူမှမသိဘူး၊ ကျောင်းအသစ်ကိုပြန်ပြောင်းတာကိုဘယ်သူမှမအောင်မြင်ဘူး၊
သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားသည့်အရာအားလုံးနှင့်ပါ ၀ င်ပါ။ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ပြောင်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်ကွက်ထဲသို့ပစ်ချခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အရမ်းပင်ပန်းနေပေမဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။ Lou's List ကိုလူတန်းစားမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်သာအသုံးပြုပါ။ SIS ကိုပင်သုံးစွဲရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ သို့သော်၊ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာသင်၏အကောင်းမြင်သဘောထားကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။ ဒါဟာလွှဲပြောင်းဖို့သိသိသာသာခက်ခဲသည်။ အချက်များတွင်သင်သည် UVA တွင်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှမသင့်တော်ဟုထင်ရသော်လည်းသင်၏အရာအားလုံးကိုပေးပြီးလူများကိုအကူအညီပေးရန်ဆက်သွယ်ပါ။
Tyler, 3rd နှစ်, နွေ ဦး ရာသီ 2016 လွှဲပြောင်း
ကျွန်ုပ် UVA သို့ပြောင်းသောအခါ Spring Transfer ကျောင်းသားများသည် Charlottesville သို့မသွားမီတစ်လသာခံခွင့်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သိချင်ခဲ့သည်။ ငါ UVA နှင့်နီးကပ်စွာနေထိုင်ခဲ့နှင့်ငါနှင့်အတူသူတို့၏တိုက်ခန်းငှားရန်ဆန္ဒရှိလူတွေကိုတွေ့ဆုံရန်နိုင်ခဲ့သည် အိပ်ဆောင်များအတွင်းနေထိုင်ခြင်းသည်နွေ ဦး ရာသီစာသင်ချိန်အတွင်းနာကျင်ရသည့်အသံဖြစ်သည့်အပြင်သင့်အားအစားအစာအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်သော့ခတ်ထားသည့်အတွက်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။ ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိသောနေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သင့်တော်သောကြောင့်သင်အများစုသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူအများနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်သေးသည်။ တကယ်တော့ငါတိုက်ခန်းမှာသောကြာနေ့ pancakes နဲ့ကော်ဖီမနက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်အသိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ စာသင်နှစ်အကုန်မှာလူ ၈၀ ကျော်ကိုအစာကျွေးခဲ့တယ်။ ငှားရမ်းခြင်းကိုစဉ်းစားပါ။ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ၏အထွတ်အထိပ်သည်သင်၏ပထမနှစ်လယ်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ သင်စာသင်ခန်းကိုသွားဖို့သင်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားနေသည့်ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွင်အူရာဗျူရို UVA ကိုသွားသည်။ သင်သည်သင်၏နှစ်လယ်စာမေးပွဲစဉ်းစားတွေးခေါ်သို့လမ်းလျှောက်လာသောအခါတွင်း, သင်ရိုက်ခတ်, Dang, ငါ UVA ကိုသွား။ အလေးအနက်ထားအရဆိုလျှင်သင်္ချိုင်းတွင်းသည်သင်ပထမ ဦး ဆုံးရောက်ရှိလာပြီးမည်သူ့ကိုမျှမသိကြောင်းသတိပြုမိသောအခါဖြစ်သည်။ သို့သော်အထွတ်အထိပ်သည်သင်စာသင်နှစ်အကုန်တွင်သင်ပြန်လှည့်ပြီးသင့်ကိုယ်သင်စဉ်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၌သင်ရှိသူများကိုနေရာချထားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အမြဲတမ်းသတိရ dသင်၏နောက်ဆုံးကျောင်းတွင်မည်သူဖြစ်သည်ကိုအရေးမကြီးပါ၊ ထိုအရပ်သို့ သွား၍ သင်၏အတန်းများ၊ သင်ပါမောက္ခများနှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများအားသင့်ကိုမိတ်ဆက်ပါ။ မကြာခင်မှာပဲမင်းဟာလူသိများလာပြီ၊ သင်ပိုင်ဆိုင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာသိတယ်၊စက်ဘီးကိုစီးပြီး West Main Street နဲ့ Downtown ကိုသွားပါ။ Charlottesville သည်တိုင်းပြည်ရှိအခြားမြို့များထက်လူတစ် ဦး ချင်းတွင်အမြင့်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်များရှိသည်။ အစာစားခြင်းသည်ထမင်းစားခန်းအတွက်ငွေပေးချေခြင်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာနိုင်သည်။
Inter-Varsity လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းမှာလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ သင်သည်သင်၏တစ်နှစ်မှလူအုပ်စုငယ်လေးတွင်ပါဝင်ပြီးညစာစားရန်၊ ဘဝအကြောင်း၊ ခရစ်တော်အကြောင်းနှင့်အချင်းချင်းရင်းနှီးရန်အတွက်အပတ်စဉ်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းတွင်အတူတကွပါဝင်နိုင်သည်။ ကောလိပ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်သင့်အားထောက်ပံ့ရန်နှင့်စိန်ခေါ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆွေများရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင် UVA ရှိခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းသည်လေ့လာမှုပြုရန်နှင့် ၂၄/၇ ဖွင့်လှစ်ရန်အဓိကနေရာဖြစ်သောအဓိပတိစိန့်ပေါ်တွင်အိမ်တစ်လုံးရှိသည်။
ကတ်ထရီနာ၊ ၂၀၁၅ အတန်း၊ TSPA ဟောင်းနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကျဆုံးခြင်း
လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ TSPA ၏အားသာချက်ကိုရယူရန်သိခဲ့လိုပါက - ကျွန်ုပ်သည်ရှက်ရန်အလွန်ကောင်းသည်၊ သူတို့ကတကယ်ကောင်းတဲ့အရင်းအမြစ်တွေ၊ ငါ၏အတှေ့အကွုံ၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုငါ့အခန်းဖော်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့သည်, သူတို့သည်နေဆဲငါ့အအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကိုနေနှင့်ငါသူတို့မရှိဘဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘယ်မှာငါမသိရပါဘူး။ အကြှနျုပျ၏အနိမ့်အချက်ကျိန်းသေအရင်းအမြစ်များကိုအားသာချက်ယူပြီးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါနေဆဲအတော်လေး Alderman သွားလာဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ကတော့ပုံဖော်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဲဒီ့နေရာမှာထားဖို့တကယ်ပဲ။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းပါ၊ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှက်စရာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်မှာလဲ။ လမ်းညွှန်ချက်တောင်းခံပါ၊ လူများကိုနေ့လည်စာစားခိုင်းပါ၊ ပါမောက္ခများနှင့်စကားပြောပါ။ လူတိုင်းကယ့်ကိုဖော်ရွေသည်နှင့်သူတို့မပါလျှင်, '' em fuck ဆိုတဲ့။ အများဆုံးအထောက်အကူပြုအရင်းအမြစ်များကိုငါ့အခန်းဖော်များနှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုသင်မေးခွန်းများမေးရန်မကြောက်ပါနဲ့, သင်ပြီးသားသူတို့ကိုသင်နှောင့်အယှက်မည်မဟုတ်သင်ကြိုက်တယ်။ စာကြည့်တိုက်မှူးများသည်အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းပြီးသင်အွန်လိုင်းရှိသည့်အရာတစ်ခုခုကိုသင်လိုအပ်လျှင်တောင်သူတို့သိထားသည်ထက် ပို၍ ပို၍ သိပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုရှာတွေ့နိုင်သည်။
သင်ပတ် ၀ န်းကျင်အဆင်ပြေသောလူများကိုရှာဖွေရန်အရေးကြီးသည်။ သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကြိုးစားရန်သွေးဆောင်ခံရနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အရေးအပါဆုံးနှင့်ရေရှည်ဆက်သွယ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ရှိသည်ဟုခံစားရသောလူများဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လှည့်လည်သွားဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် - တစ်ယောက်တည်းစာသင်ခန်းသို့သွားခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ယောက်တည်းစားခြင်းသည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးတော့မဟုတ်ချေ၊ သင်ကောင်းကောင်းရရှိနိုင်သဖြင့်သင်ကအခြားမဟုတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်သွားလာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခများနှင့်အုပ်ချုပ်သူများ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယနှစ် Dean Groves နှင့်အတူသူ၏ရုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီးနေ့လည်စာစားခဲ့သည်။
ထို့ထက်ကားသင်လွှဲပြောင်းခြင်းကြောင့်ယုတ်ညံ့မှုကိုမခံစားရပါ။ သငျသညျအခြားလူတိုင်းကဲ့သို့ Wahoo ၏သလောက်ဖြစ်ကြသည်။ UVA သည်ကျွန်ုပ်နေအိမ်၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သမျှတွင်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး လွှဲပြောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆီးတားပါဘူး။ HOOS သွားပါ
မှ Ian, 3rd နှစ်, နွေ ဦး 2016 လွှဲပြောင်း နှင့်လက်ရှိ TSPA
ကိုယ့် nigga ပေမယ့်အဝါရောင်ကိုမဖြစ်ကြောင်းကို
ငါလွှဲပြောင်းအတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန်အချိန်ပြန်ခရီးသွားနိုင်လျှင်, ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ငါမသိသေးသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ပေးပေမယ့်အစားငါသတိမမူမယ်လို့သိသောအကြံပေးချက်ကိုအားဖြည့်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာပုံမှန်ပြောင်းရွှေ့ကြေးအကြံဥာဏ် (ပုံမှန်ကလပ်အသင်းများ၊ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ ရေငုပ်ခြင်းစသဖြင့်) ၏ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူများသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ယခုငါသိသည်အတိုင်း, ဤ platitudes အကြောင်းပြချက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ကြသည်: သူတို့ကြိုးစားခဲ့ကြနှင့်နေရာအသစ်တစ်ခုအတွက်အခြေချ၏စစ်မှန်တဲ့နည်းလမ်းများ။ ဒါကြောင့်ပြောင်းရွှေ့လာသူကျောင်းသားသစ်များအတွက်ဒီအကြံဥာဏ်ကိုကျိန်းသေလို့မယူဖို့၊ တိုက်စစ်ကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ငါ့အတွက်၊ အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကျွန်ုပ်၏အပြောင်းအရွှေ့အတွေ့အကြုံ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုလျှော့ချရန်သင်ယူခဲ့ပါက၎င်းသည်ပိုမိုချောမွေ့သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်။ မင်းအရင်အဖွဲ့အစည်းကိုမေ့သွားရင်တောင်မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချမိဘူးဆိုတာသတိရပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုနှစ်သက်သောကြောင့် အကယ်၍ သင်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်ဆိုသောကြောင့်သင်ထပ်မံပြုလုပ်သင့်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မှာသင်တစ်ခါတစ်ရံသင်အမှားလုပ်မိသကဲ့သို့ခံစားမိလျှင်ပင်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်သင်လွှဲပြောင်းလိုကြောင်းသင့်ကိုယ်သင်သတိပေးရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်သည်သူ၌ရှိသည့်အရာ၏ပုံသဏ္takesာန်ကိုယူသည်။ သင်၏အခြေအနေကိုတန်ဖိုးထားပါ၊
အရင်းအမြစ်များအနေနှင့်သင်၏ TSPA (transfer Peer Advisor) ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သူတို့သည်သင့်တွင်ရှိသည့်မည်သည့်မေးခွန်းများမဆိုသင့်အားကူညီရန်သင့်အားပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်၏ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကိုအရင်းအမြစ်များအဖြစ်အသုံးပြုပါ။
ပါ ၀ င်ပါ။
အမည်မသိ, 4th နှစ်, နွေ ဦး 2016 လွှဲပြောင်း
သင်၏ GPA သည်သင်၏ခရက်ဒစ်များနှင့်အတူလွှဲပြောင်းပေးသည်ကိုကံမကောင်းစွာဖြင့်သင်ဒီမှာရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်လုပ်နိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည်မဟုတ်သော်လည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ သင်၏အကူအညီကိုအများဆုံးသောနည်းဖြင့်သင့်အားပေးဆပ်ရန်သေချာစေရန်သင်၏မှတ်တမ်းကိုသေချာစွာဂရုပြုပါ။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှာသင်၏ပထမဆုံးစာသားသာမကစာသင်တိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်မသေချာမရေရာမှုဖြစ်သည်။ သင်အမြဲတမ်းအခြားလူတိုင်းထံမှအချိန်ဇယားကိုချွတ်ခံစားရတယ်။ လိုအပ်ချက်အသစ်များကိုဆက်လက်လေ့လာခြင်းနှင့်ခရက်ဒစ်၏စည်းကမ်းချက်များအရလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုခြင်းသည်သင်၏ပညာရေးအစီအစဉ်ကိုအမှန်ပင်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်၏ကျောင်းနောက်ဆုံးကာလ၌ဖြစ်ခဲ့ဖူးခြင်းမရှိသောနောက်ဆုံးတွင်ကျောင်း၌သင်သက်တောင့်သက်သာရှိချိန်တွင်တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။ အခြားကျောင်းသူ / သားများ၊ ပြောင်းရွှေ့လာသူများနှင့်မဟုတ်သော၊ သင်၏သူငယ်ချင်းများသည်သင်၏မေးခွန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင့်အားကြိုဆိုသော UVA ကောလိပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူအုပ်စုတစ်စုကိုရှာဖွေပါ။
Nigel, 3rd နှစ်, နွေ ဦး ရာသီ 2016 လွှဲပြောင်း
ပထမနှစ်များထက် ပို၍ မသိသောလူများသည်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ UVA တွင်ရောက်နေသည့်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်အိမ်၌တစ်ယောက်တည်းလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခန်းထဲမှာအပူအအေးနည်းပါးသောကြောင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အပြောင်းအရွှေ့အတွေ့အကြုံ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင်ရှိသောရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးထိုးလှူဒါန်းမှုအတွက်လေလံဆွဲသည့်နေ့ဖြစ်သည်။ သုံးပတ်ကြာသင်တန်းများတက်ခြင်း၊ လူရာပေါင်းများစွာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် UVA အသိုင်းအဝိုင်း၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအလျင်စလိုအဖြစ်အပျက်များအတွက်လမ်းညွှန်ခြင်း၊ UVA ကိုငါ့ချောချောမွေ့မွေ့ကူးပြောင်းခြင်း။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးတစ်နှစ်အဖြစ်မလာသည်ကို ထောက်၍၊ သင်၏ခြေချောင်းများကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်များများသို့နှစ်မြှုပ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ မြေအောက်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများသို့ကျွန်ုပ်ပေးပို့ခဲ့သည့်အီးမေးလ်တစ်ဒါဇင်ခန့်တွင်တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း၎င်းတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ထံပြန်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာလုံးဝသွားပြီဘယ်တော့မှထက်ပါတီနောက်ကျသွားဖို့အမြဲပိုကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုသို့လွယ်ကူစွာလွတ်မြောက်စေရန်ကျွန်ုပ်ကူညီခဲ့သည့်အရင်းအမြစ်များသည် UVA တွင်လည်းလေ့လာခဲ့သောမိသားစုသူငယ်ချင်းများဖြစ်သည်။ သင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောခိုင်မာသောမိတ်ဆွေအုပ်စုတစ်စုကိုရှာဖွေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် UVA သို့ကူးပြောင်းခြင်းကိုပိုမိုချောမွေ့စေသည်။ အိမ်ရာရှာဖွေခြင်းမှ စ၍ လေ့လာရန်အတွက်လေ့လာခြင်းသင်တန်းများအထိ၊ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျောင်းသားများကိုအတွေ့အကြုံအတူတူပင်အတူတူသွားခြင်းသည်သင်အသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားရန်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။
ကေတီ, 4th နှစ်, လွှဲပြောင်း Fall
ငါ UVA မှာအပြိုင်အဆိုင်လေထုကိုပိုမိုသတိထားမိခဲ့သည်အလိုရှိ၏။ ငါအမှုအရာအဖြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လူမှုရေးအရစိန်ခေါ်မဟုတ်ရှိရာဗာဂျီးနီးယား Tech မှလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ကလပ်များတွင်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်များတွဲထားခြင်းမရှိဘဲအတန်းများကိုပိုမိုဖြေလျော့ပေးခဲ့သည်။ ငါ UVA ခက်ခဲလိမ့်မည်, အထူးသဖြင့်ကြိုတင်ဆက်သွယ်မှုများတစ်တန်မလိုဘဲလွှဲပြောင်းကျောင်းသားအဖြစ်လာမယ့်, ဒါပေမယ့်ငါကတကယ်တော့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ကွဲပြားခြားနားနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး ဤနေရာတွင်ဖတ်ရှုမှုများနှင့်အညီသင်သေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆရာများသည်သင်ကြားရေးတွင်မည်သည့်အခါမျှဘယ်သောအခါမျှသွားမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ် Tech မှကျွန်ုပ်၏အတန်းများတွင်စိတ်ပူစရာမလိုသောအရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ချက်ချင်းပြန်လည်သိမ်းဆည်းမည့်အစားသင်လေ့လာသောအချက်အလက်များကိုလည်းလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာပြီးပါကစမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းထိုပြောင်းလဲမှုသည်ခက်ခဲသောအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ၏အလွှဲပြောင်းအတှေ့အကွုံ၏သင်္ချိုင်းတွင်းပထမ ဦး ဆုံးစာသင်အလယ်ဖြစ်ကောင်းဒီမှာဒီမှာပထမနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဒီမှာကမ်းလှမ်းတဲ့ပြောင်းရွှေ့အိမ်ယာတွင်နေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါ့အတှေ့အကွုံကြယ်ထက်လျော့နည်းခဲ့သည်။ ငါပြောင်းရွှေ့အိမ်ရာရှိရာ tour ည့်လမ်းညွှန်ကိုမေးသောအခါသူတို့ကမတည်ရှိပါဘူးပြောတယ်သောအခါငါတစ်ခုခုချွတ်ခဲ့သည်ကိုသိသင့်တယ် ငါအရမ်းသေးငယ်တိတ်ဆိတ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ငါ့ကိုပတ်လည်ကလူအများကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အိုးအိမ်ပြောင်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော့်ကြမ်းပြင်မှာရှိတဲ့လူ ဦး ရေရဲ့ထက်ဝက်အောက်လောက်ကလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ ငါသည်လည်းကလပ်များနှင့်အသင်းအဖွဲ့များတွင်ပါ ၀ င်ရန်မျှော်လင့်သည်လာသည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောအဖွဲ့အစည်းများမှငြင်းပယ်ခံရပြီးနောက်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ လူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်မည်မျှကြမ်းတမ်းသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ငါ့အထွတ်အထိပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီ၊ ငါမထိသေးဘူးလို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ တတိယနှစ်မှာပိုကောင်းတဲ့အိမ်ရာအခြေအနေရှိလို့ကျွန်တော်ဂရုစိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါသိတဲ့လွှဲပြောင်းငွေအများစုကသူတို့ဟာ UVA မှာပထမ ဦး ဆုံးစာသင်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာအပြင်လူတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ အနည်းဆုံး UVA မှာအနည်းဆုံးဒုတိယစာသင်ချိန်အထိသူတို့ရဲ့အတန်းထဲမ ၀ င်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်၊ ဒီကြမ်းတမ်းကန ဦး အကူးအပြောင်းရှိသည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာငါ့ရဲ့အချိန်တွေကတဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းလာပြီးပိုကောင်းလာပြီ။
အရှုံးမပေးပါနဲ့ !! လူများစွာသည်ပညာရေးနှင့်လူမှုရေးနှစ်ခုစလုံးတွင်အလွန်ခက်ခဲသောပထမ ဦး ဆုံးစာသင်ခန်းရှိသည်။ သင်ရုန်းကန်နေလျှင်သင်၏အတန်းများတွင် ဆက်၍ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါ၊ ရုံးချိန်သို့သွားပါ။ ပါမောက္ခများကကူညီရန်ထက်မကပါ။ လေ့လာရေးအဖွဲ့များဖွဲ့ရန်ကြိုးစားပါ။ သင်စိတ်ဝင်စားသော်လည်းလက်ခံခွင့်မရသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိပါကထပ်မံကြိုးစားပါ။ အပြောင်းအရွှေ့နှင့်လွှဲပြောင်းခြင်းမှလူအများအပြားတို့သည်လက်ခံမှုကိုရရှိရန်အတွက်အဖွဲ့အစည်းများစွာသို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလျှောက်ထားခဲ့ကြရသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်တော်သောအရာဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါကထပ်မံကြိုးစားပါ။
ငါအရပျ၌အထောကျအကူအရင်းအမြစ်များကိုအများကြီးရှိပါတယ်မထင်ကြဘူး။ ငါအသုံးပြုသောမဆိုမှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Transfer Transfer Peer Advisor အစီအစဉ်သည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းတို့သည်သူတို့၏အလားအလာကိုအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းမဟုတ်ပါ။ လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းသားကောင်စီနှင့် TSPA အစီအစဉ်နှင့်အလုပ်လုပ်နေပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အပြောင်းအရွှေ့ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ပထမနှစ်တွင်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်ဤအရင်းအမြစ်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်အမြင့်ဆုံးကိုကူညီရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ငါမသက်ဆိုင်ပါကထင်ရပေမည်ဘယ်လောက်ခက်ခဲ၏, ပါဝင်ပတ်သက်ရရန်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ထင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပူးတွဲမပါရှိကြောင်းထွက်ကလပ်များကျိန်းသေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်အချို့သောလူတွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါ။ လျှောက်လွှာကိုလက်ခံခြင်း၊ လက်ခံခြင်းကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသည်။ ထူးခြားမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေသည့်ကလပ်များကိုရှာဖွေပြီးကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းကိုကြည့်ရှုမည့်ကလပ်များအစားသင်စိတ်ဝင်စားသည့်အရာများပါဝင်သည်ကိုရှာပါ။ သငျသညျသူတို့ကိုပိုမိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်လမ်းနှင့်အတူလူတို့နှင့်အတူပိုမိုနက်ရှိုင်းဆက်သွယ်မှုလုပ်လိမ့်မယ်! ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ရာအခြေအနေကအပြောင်းအလဲအားလုံးကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ငါဒီမှာပထမ ဦး ဆုံးနှစ်မှာငါဟာဆိုးရွားလှတဲ့အိမ်ရာအခြေအနေနဲ့နောက်နှစ်မှာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ရာအခြေအနေမရောက်မချင်းငါ့ကိုဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့သလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးအတွေ့အကြုံ၌အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအိမ်ရာအခြေအနေရောက်သောအခါ UVA အပေါ်ထားရှိသောကျွန်ုပ်၏သဘောထားပြောင်းလဲသွားသည်။ ပြီးတော့မင်းကိုအဓိကထားတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကိုတခြားလူတွေရှိရင်လေ့လာဖို့အမြဲတမ်းလွယ်ကူသွားတယ်။